निर्मला हत्या प्रकरण - थप प्रमाण भेटियो 'त्यो केटी छाड्देऊ त्यो भन्दा राम्री मिलाइदिन्छु - Muldhar Post
निर्मला हत्या प्रकरण – थप प्रमाण भेटियो ‘त्यो केटी छाड्देऊ त्यो भन्दा राम्री मिलाइदिन्छु
पत्रपत्रिकाट २०७५, १८ मंसिर मंगलवार 654 पटक हेरिएको
आज निर्मला घरमा छैन, भोलि कल गर्नू।’निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछि सम्भावित अपराधीको ‘क्लु’ खोजिरहेको स्थानीय प्रहरीलाई सघाउन काठमाडौँबाट सिआइबीको टोली खटिएको थियो। टोलीले टेक्निकल पार्टमा पनि सघाइरहेको थियो।
घटनास्थल वरपरका एनसेल र नेपाल टेलिकमका टु जी र थ्री जी दुवै टावरमा ठोक्किएका सबै मोबाइल नम्बरहरुको अनुसन्धान जारी थियो – कुन नम्बरबाट कति बेला, कुन नम्बरमा, कुन ठाउँबाट फोन गरेको थियो? एसएमएसहरु स्क्रिनिङ भएका थिए। ‘निर्मला’ किवर्ड राखेर सर्च गर्दा भेटिएको एउटा एसएमएसले प्रहरी झस्कियो। यो एसएमएस कसले कसलाई पठायो? अनुसन्धान गर्दा एक युवतीले युवकको मोबाइलमा त्यो एसएमएस पठाएको खुल्यो।
ती युवतीले कसलाई ‘निर्मला घरमा नभएको र भोलि कल गर्नु’ भनेकी हुन्? निर्मलाको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने कारण के थियो? ‘रिसइबी साँध्ने त सौता हो, तर उनीहरु अहिले इन्डियामा छन्।’
निर्मलाको शव भेटिएपछि सुरुका दिनमा प्रहरीले निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तलाई तपाईँलाई को माथि शंका छ त भनेर सोध्दा उनले यस्तो भनेकी थिइन्। लगातार तीनवटी छोरी जन्मिएपछि १० वर्षअघि नै श्रीमान् यज्ञराज पन्तले लक्ष्मीलाई दुर्गादेवीको सौताका रुपमा भित्र्याएका थिए। आफूले खोजेकी बुहारी (दुर्गादेवी)ले दुःख पाउलिन् भन्ने लागेर ससुराले २८ धूर जग्गामध्ये आधा बुहारीको नाममा गरिदिएका थिए। साँध जोडिएको आधा जग्गा बेचेर यज्ञराज कान्छी श्रीमतीसँग भासीमा अलग्गै बस्न थालेका थालेका थिए। ठेलामा पानीपुरी, चटपटे बेचेर जीविकोपार्जन गर्थे, उनीहरु। लक्ष्मीले भने पहिलो सन्तान नै छोरा जन्माइन्।
निर्मलाको शव फेला पर्दा यज्ञराज कान्छी श्रीमतीसँग भारतमा थिए, गुरु पूर्णिमाका लागि राधेराधेको एउटा धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुन। टोलीमा रहेकी एक महिलाको भारतीय सिममा उनैका दाजुले फोन गरेपछि यज्ञराजले बल्ल यो घटनाबारे जानकारी पाए र फर्किए। महेन्द्रनगरको धर्नास्थलमा हामीसँग कुरा गर्दै यज्ञराजले भनेका थिए, ‘फर्केर आउँदा गड्डाचौकी बोर्डर कट्ने बित्तिकै यो (कान्छी श्रीमतीलाई देखाउँदै) रुन थाली।’ अहिले पनि नेताहरु भेट्न आउँदा आमाभन्दा कान्छी आमा बढी रोएको दृश्य युट्युबमा भेटिन्छन्।
‘८० प्रतिशतभन्दा बढी बलात्कारका घटना चिनजानकै मान्छेबाट हुन्छ र चिन्ने डरले हत्या गर्छ’ यो तथ्यबाट निर्देशित भएर आफन्त र चिनजानका मानिसबाटै अनुसन्धान गरी केही ‘क्लु’को खोजी गरिरहेको थियो, प्रहरी। भारतमा रहेका बाबुले नेपालमा छोरीको हत्या भएको खबर कसरी पाए? कसले दियो? यसमा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छ कि भनेर समेत अनुसन्धान भएको देखिन्छ।
४० नकटेकी आमा दुर्गादेवी श्रीमानले छाडेपछि छोरीहरुसँग मात्र घरमा बस्दै आएको धेरै वर्ष भयो। अरु कुनै पात्र पो छ कि भन्ने कोणबाट पनि अनुसन्धान गर्‍यो प्रहरीले। निर्मलाको मोबाइल थिएन। कसैलाई फोन गर्नुपरे निर्मलाले आमाकै मोबाइलबाट गर्थिन्। आमाकै मोबाइलबाट निर्मलाकी १० कक्षा पढ्ने दिदी मनीषाले पनि फोन गर्थिन्।
आमाको मोबाइलको कल डिटेल हेर्दा ‘आज निर्मला घरमा छैन, भोलि कल गर्नू’ भनेर एसएमएस पठाउने सपना*सित पनि सम्पर्क भएको देखियो। कल लोकेसन रेकर्ड हेर्दा जुन दिन निर्मला हराएकी थिइन्, त्यही दिन बिहान सपनाको मोबाइल निर्मलाको घर आसपास एक्टिभ भएको पनि देखिन्छ। त्यसपछि साउन १८ गते सपनालाई प्रहरीले सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिन्छ।
अन्ततः उनले मोबाइल बोक्ने गरेको स्वीकार गर्छिन्। प्रहरीले उनले बोक्ने गरेको मोबाइलको आइएमइआई नम्बरमा कुन कुन सिम एक्टिभ भएको छ भन्ने डिटेल खोज्छ। र, अर्को आश्चर्यजनक तथ्य फेला पर्छ – सपनाको त्यो मोबाइलमा एउटा हैन, १६ वटा सिम एक्टिभ भएको देखिन्छ। त्यो पनि छोटो समयको अन्तरालमै।
कलेज पढ्दै गरेकी युवतीले यति चाँडो यति धेरै सिम किन परिवर्तन गरिन्? प्रहरीले सोध्छ। सपना आफूले त्यति धेरै सिम कार्ड बोकेको पनि स्वीकार गर्दिनन्।
पछि उनको कोठाको दलिनमा सिमकार्डहरु लुकाएको फेला पर्छ। निर्मलाको हत्या साउन १० गते दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेको बीचमा भएको निष्कर्षमा पुगेको हुन्छ प्रहरी। सपना २ देखि ५ बजेको समयमा कहाँ थिइन्? उनीसँग अरू कोही थिए? प्रहरीको लागि अनुसन्धानको विषय बनेको हुन्छ।
‘त्यो केटी छाड्देऊ। त्यो भन्दा राम्री मिलाइदिन्छु।’ आखिर के गर्थिन् सपना?
अन्ततः सपनालाई साँचो नबोली धरै भएन। जुन दिन निर्मला हराएकी थिइन्, त्यो दिन बिहानको खाना खाएपछि उनी एउटा कामले महेन्द्रनगर बजार गएकी हुन्छिन्। सपना बजार जाने बाटो र निर्मलाको शव भेटिएको स्थान नजिकै हो। त्यसैले टावर एउटै देखिएको खुल्छ।
तर, नाम निर्मला भए पनि थर अर्कै भएकी सपनाकी साथीसित मोबाइल रहेनछ। तिनले सपनाकै मोबाइलबाट आफ्नो ब्वाइफ्रेन्डसँग कुरा गर्दी रहिछिन्। त्यही साथीले भने अनुसार उनले उसको ब्वाइफ्रेन्डलाई एसएमएस गरेर ‘निर्मला आज छैन भोलि कल गर्नु’ भनेको बताइन्। पटक पटक झुट बोल्दै आएकी सपनाको कुरा सहजै विश्वास गर्ने पक्षमा अनुसन्धानकर्मी हुँदैनन्। को हो त त्यो ब्वाइफ्रेन्ड? सपनाले भनेको केटालाई झिकाएर सोधपूछ गर्दा उसको कुरा सत्य साबित हुन्छ। सपनाका शङ्कास्पद व्यवहार, संयोग मिल्न गएको म्यासेज र परिवार समेतलाई ‘मोबाइल बोक्दिनँ’ भन्ने झुटले उनी पनि शंकाको घेरामा परिन्। फरक थरकी निर्मलामात्र होइन, सपनाले एकै पटक ८ जना युवकसँग ‘प्रेम’ सन्देश आदानप्रदान गरेको तथ्य पनि उनकै मोबाइलको एसएमएसहरुबाट फेला पर्‍यो।
पाँच दिनको अनुसन्धान पछि सपना प्रहरी शङ्काको घेराबाट बाहिरिइन्। र, उनीसँगै भेटिएको एउटा ‘क्लु’ र शंका समाप्त भयो। *स्थलगत अनुसन्धानमा जुटेका जानकारीहरुले देखाएका तथ्य र अनुसन्धानकर्मीले समेत निर्मला प्रकरणमा उनको कुनै संलग्नता नभएको भनेर क्लिन चिट दिइसकेका कारण हामीले युवतीको परिचय गोप्य राख्नका लागि नाम परिवर्तन गरेका हौं। साथमा महेन्द्र बम ।
(प्रहरी र गृहमन्त्रीको कमजोरीका कथाहरु एकएक गर्दै सार्वजनिक भएपछि धेरैलाई लाग्यो होला – निर्मला प्रकरण त सकियो। पहिलोपोस्टले थालेको शृङ्खलाको यो दशौं भाग हो र यो अहिले नै टुंगिने अवस्थमा छैन। धेरै पहेलीहरु अझै उजागर भएका छैनन्, प्रतीक्षा गर्नुस्।) पहिलो पोष्टबाट